”Halis buu nagu yahay!” – Haweenka oo ka sheeganaya Squid Game & waxa ay ku qoonsadeen | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Halis buu nagu yahay!” – Haweenka oo ka sheeganaya Squid Game &...
”Halis buu nagu yahay!” – Haweenka oo ka sheeganaya Squid Game & waxa ay ku qoonsadeen
(Cheongju) 31 Okt 2021 – Haweenka South Korea ayaa weerar ku qaaday musalsalka ka socda Netflix ee Squid Game kaasoo Ye-eun ay ku jirto sheegeen in uu haweenka xumeeynayo, iyadoo sheegtay inay joojisey daawashada qaybihii u haray.
Jane Park, 24-jir, iyo Seul Kim, 27-jir, ayaa sheegay in ay doonayeen inay musalsalkan daawadaan, balse ay haatan aragtidaa bedeleen kaddib markii ay ogaadeen in uu haweenka u sawirayo sidii badeeco lagu guulaysanayo, iyagoo tilmaamay in haweenka Kuuriyaanka ihi ay awalba dhibanaayeen, sida ay yiraahdeen.
Squid Game ayay dad qaan lagu leeyahay ku tartamayaan abaalmarin, isagoo noqday musalsalkii abid ugu fiicnaa Netflix, yeelkeede, haween badan ayaa sheegay inay qoonsadeen maadaama uu haweenka u sawirayo badeeco la huri karo oo u samaysan jinsi iwm.
Dumarka sida u dhaama
Waxay sheegeen inay ashtako gaarsiin doonaan soo saaraha Dong-hyuk Hwang taasoo ay ugu sheegayaan inay ”haweenku istaahilaan sidan si ka roon”, waxaana durba ay arrintani xulaysaa madlaha dhedigoodka u ololeeya ee dalkaasi Kuuriya iyo ka shishe.
“Squid Game waxay halis ku tahay haweenka, sidaa ayaan aaminsan nahay.” ayay tiri afhayeenka Haeil ee Hae-in Shim.
Previous article”Marka aan hubka Ruushka isticmaalno yaa Ruush qabsan jirey?!” – Turkiga oo Ruushka la garramay kuna dhega hadlay Faransiiska (Waxa la isku hayo?)
Next articleDad 10 qof ka badan oo ku waxyeelloobey aroos loo weerar muusig laga shiday dartii (Dhimasho jirta)